Kiss that Kills ( 2018 ) - Myanmar Asian TV Channel
Original Title : Todome no Kisu
အခုတစ်ခေါက်မှာတော့ လက်ရှိ ဂျပန်ဇာတ်ကား ပရိသတ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစား hot ဖြစ်လျက်ရှိတဲ့ kiss that Kills ( Todome.no.Kiss ) ဇာတ်ကားလေးကို တင်ဆက်လိုက်ရပါတယ် ….
သရုပ်ဆောင်အဖြစ် – ပျိုမေတွေရဲ့ အသည်းစွဲ မင်းသားကျော် တစ်လက်ဖြစ်တဲ့ Kento Yamazaki က အဓိက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် …
ကလေးဘဝက အတိတ်မှာ အရိပ်ဆိုးတွေ ရှိခဲ့တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ဟာ အသက်ကြီးလာတဲ့ အချိန်မှာ … သူက အချစ်က လူတွေကို မပျော်ရွှင်စေဘူးဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်ကို လက်ကိုင်ထားပြီး … အမျိုးသမီးတွေ အတွက် အပျော်မောင် လုပ်ပြီး ပိုက်ဆံရှာတယ် … ပြောချင်တာကတော့ sponsor ထား သလိုမျိုးပေါ့ …
ဒါက တော့ ပုံမှန်လိုပဲ ရုပ်လေးကလည်း ချောတော့ … သူ့အတွက် ချမ်းသာတဲ့ သူရှာရတာ မခက်ဘူးပေါ့ … အဲ့လို အဆင်ပြေနေတယ်လို့ ပြောလို့ရတဲ့ သူ့ဘဝထဲကို … ဘယ်ကမှန်း မသိတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်က ခရစ်စ္စမတ် အကြိုနေ့မှာ ရောက်လာပြီး … သူ့ကို နမ်းလိုက်တယ် …
အဲ့အနမ်းဆုံးတဲ့ အချိန်မှာပဲ သူသေသွားပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ (၇) ရက် ကို ပြန်ရောက်သွားတယ် …
အဲ့လိုပဲ သူ့အတွက် ခရစ်စမတ် အကြိုနေ့ရောက်တိုင်း … အဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်က သူ့ကို အတင်း မရရအောင် နမ်းပြီး အသေသတ် , အတိတ် (၇) ရက် ကို ပြန်ပြန်ပို့တယ် …
ဘာလို့ ဖြစ်မှန်းလည်း မသိ ဘာကြောင့် မှန်းလည်းမသိနဲ့ သံသရာ လည်နေတယ် ?
ကဲ … ကိုယ်လည်း တစ်ပိုင်းပဲ ကြည့်ရသေးတော့ ဒါပဲ ညွှန်းတတ်ဦးမယ် …
ဇာတ်ကားကတော့ စိတ်ဝင်ကောင်းသလားတော့ မမေးနဲ့ ကြည့်လိုက်တော့ …
သူများ အိပ်ရေး အပျက်ခံပြီး ကြည့်စေချင်လွန်းလို့ တစ်ညတည်း ပြီးအောင်ပြန်ထားတာနော် …
ဒေါင်းကြည့်ကြ မကြည့်ရင် စိတ်ဆိုးမှာ ><
ဇာတ်လမ်းပုံစံလေးကတော့ Mystery , Romance , Drama , Fantasy & Supernatural လေး ဖြစ်ပြီး …
Rating အရ MyDramaList မှာ 8.2/10 ရရှိထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ …
Episode 01 : Openload | SolidDrive
Episode 02 : Openload | SolidDrive
Starring: Kento Yamazaki,